Home » Fiarovan-tena amin'ny loza sy loza » Aza esorina aloha ny saron-tava
Ny Administration Security Security (TSA) dia manitatra ny takiana amin'ny saron-tava ho an'ny olona manerana ny tambajotram-pitaterana rehetra manerana an'i Etazonia.
Ny fepetra takiana amin'ny saron-tava voalohany an'ny TSA dia nanomboka ny 1 febroary niaraka tamin'ny datin'ny 11 Mey.
Ny fanitarana sarontava tarehy dia mitaky saron-tava amin'ny seranam-piaramanidina, fiaramanidina ara-barotra an-tsambo, amin'ny fiara fitateram-bahoaka tsy mataho-dàlana, ary ny rafitra fitateram-bahoaka sy fiarandalamby hatramin'ny 13 septambra 2021.
Ny torolàlana CDC dia mbola mitaky olona tsirairay hisaron-tava, elanelana ara-tsosialy ary hanasa tanana na hampiasa fanasan-tanana.
"Ny fepetra takiana amin'ny sarontava federaly manerana ny rafitry ny fitaterana dia mitady hampihena ny fiparitahan'ny COVID-19 amin'ny fitateram-bahoaka," hoy i Darby LaJoye, tompon'andraikitra ambony manao ny andraikitry ny TSA Administrator. “Amin'izao fotoana izao dia antsasaky ny olon-dehibe rehetra no manana tifitra fanaovam-baksiny farafaharatsiny ary saron-tava no mbola fitaovana lehibe handresena ity areti-mandringana ity. Hanohy hiara-hiasa akaiky amin'ny Ivotoerana fanaraha-maso sy fisorohana aretina (CDC) izahay hanombanana ny filana ireo torolàlana ireo ary hahafantatra ny haavon'ny fanarahan-dalàna hatreto. "
Vao haingana ny CDC dia nanambara fa ireo mpandeha vita vaksiny feno vaksinin'ny alàlan'ny FDA dia afaka mandeha soa aman-tsara ao Etazonia, saingy ny torolàlana ao amin'ny CDC dia mitaky ny hisaron-tava olona, ​​ny halaviran'ny fiaraha-monina ary ny fanasana tanana na ny fanadiovana tanana. Ny fanitarana ny takiana amin'ny saron-tarehy dia mifanaraka amin'io torolàlana farany CDC io. Ny TSA dia mamporisika ny mpandeha rehetra, sy ny mpandeha fiaramanidina sy fiara fitateram-bahoaka, ao anatin'izany ireo olona mihevitra ny fitsangatsanganana iraisampirenena, mba haharaka hatrany ny fiovana amin'ireo fepetra takiana ireo amin'ny fanamarinana Tsa ary Tranokala CDCs alohan'ny handehanany ny diany.